नौजनाको हत्या काण्डमा सातवटा प्रश्न: ससुरालीको वंश सिध्याएर ज्वाईले किन गरे आत्महत्या ? - PUBLICAAWAJ
प्रकाशित : बुधबार, जेठ ०८, २०७६०८:२२ पब्लिक आवाज /संवाददाता
पाँचथर। मिक्लाजुङ ३ आरुबोटेमा भएको ९ जनाको हत्यामा संलग्न भएको आशंका गरिएका मानबहादुर माखिम झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेपछि घटना थप रहस्यमय भएको छ। देशैभरका आम सर्वसाधारणको दैनिकी शुरु भएसँगै फैलिएको हत्याको खबरले मंगलवार विहानैदेखि चर्चा पाइरहेको थियो। यहि चर्चामा ससुराली र साँढ दाजुको वंशै सकाउने गरि ९ जनाको हत्याको आशंका गरिएका व्यक्ति माखिम समेत मृत भेटिएपछि स्थिति जटिल बनेको हो।
यहि जटिलतालाई चिर्न नेपाल प्रहरीले आफ्नो विशेषज्ञ टोली घटनास्थल पठाएको छ। काठमाण्डौबाट पठाइएको सिआईबीको बिशेष टोली पाँचथर आइपुगेको छ। टोलीले घटनास्थलको स्थलगत जाँचबुँझ गरेपछि शव उठाइएको छ।
शवलाइ पोष्टमार्टमको लागी बिपी कोइराला स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको घटनास्थलमा रहेका पत्रकार सरोज शर्माले जानकारी दिए । अहिले आरुबोटेमा भएको ९ वटा शव र मिक्लाजुङ ८ लुमाङदिनमा झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका मानबहादुर माखिमको शव मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको केन्द्र रविमा भेला पारेर पोष्टमार्टमका लागि धरान लैजाने तयारी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाँचथरका प्रहरी नायव उपरिक्षक नरेन्द्र कुँवरले जानकारी दिए।
मिक्लाजुङ ३ आरुबोटेमा गए राती ९ जनाको हत्या भएको हो। मिक्लाजुङ ३ आरुबोटेको वडा कार्यलय छेउमा सो घटना भएको हो । धनराज शेर्माको ५ जना परिवार र बमकुमार फियाकको ४ जनाको हत्या भएको हो।
हत्या गरिएकाहरुमा ३६ वर्षीया जस्मिता फियाक, ४१ वर्षीय धनराज शेर्मा, २६ वर्षीया मनकुमारी फियाक, ६ वर्षीया इक्सा शेर्मा, १३ वर्षीया योवना शेर्मा, ८ वर्षीया मुना शेर्मा, ७४ वर्षीय बमबहादुर फियाक, पुर्सिकुमारी फियाक बमबहादुरकी श्रीमती र १२ वर्षीया आशिका खजुम लिम्बूको विभत्स हत्या भएको हो । १२ वर्षीया सीता खजुम भने भागेर बाँच्न सफल भएकी छन् । उनी घाइते छिन् ।
९ जनाको विभत्स हत्यामा ज्वाइँ र साढुभाइ पर्ने मानबहादुर माखिमकै संलग्नता रहेको हुनसक्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष प्रहरीले निकालेको छ । ९ जनाको हत्या भएको घटनामा संलग्न रहेको भनी आशंका गरिएका माखिम घरभन्दा झण्डै दुई घण्टाको पैदल दूरीमा पर्ने लिम्बा गाउँमा रुखमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका हुन्।
मानबहादुरको शव घटनास्थल भन्दा २ घन्टा टाढा रहेको मिक्लाजुङ ७ लिम्बामा एक रुखमा झुन्डीएको अवस्थामा फेला परेको थियो । उनको शव रहेको स्थान नजिकै रगत पोतिएको अवस्थामा खुकरी र रगत लतपतिएकै कपडाहरु भेटिदा उनैले हत्या गरेका हुन कि भनेर आशंका गरिएको छ। यद्यपी यसबारेमा थप अनुसन्धान प्रहरीले शुरु गरेको छ।
पाँचथर हत्या, सातथरी प्रश्न
दुई परिवारको हत्यामा अर्का ज्वाइँ मानबहादुर मोखिमको संलग्नता रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । तर, मानबहादुर पनि मुख्य घटनास्थलभन्दा करिब २५ किलोमिटर टाढा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका छन् ।
सो गाउँमा सिलाइ–कटाइसम्बन्धी तालिम चलेको र गत साता धनराजको घरमा खाजा खाने सबैजसो गाउँले बिरामी भएको स्थानीय अस्पतालले पनि पुष्टि गरेको छ । नुनमा सिसाको धुलो मिसाएर हत्याको प्रयास गरेको भन्दै ज्वाइँ मानबहादुरमाथि नै आशंका गरिएको थियो ।
साढुको घरमा आएर भान्सामा पसेर उनले तरकारीमा सिसा कसरी मिसाए ? अहिलेसम्म खुलेको छैन । उनी त्यो दिन गाउँमा आएको कसैले पुष्टि गरेको छैन ।
समर्पितका डा. विशालचन्द्र सुवेदीले मंगलबार राति नयाँ पत्रिकासँग टेलिफोनमा भने, ‘दुईजना बिरामी बेहोसजस्तै अवस्थामा आउनुभएको थियो, उहाँहरूले कुनै प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुभएको थिएन । तर, अर्को दिन बोल्न सक्नुभयो ।
घाँटी र पेट दुखेको बताउनुभयो । उहाँहरूका आफन्तले सिसाको धुलो मिसिएको नुन पनि लिएर आउनुभएको थियो । जिल्ला प्रशासन र प्रहरीका हाकिमहरू पनि आउनुभएको थियो । तर, बिरामीहरू ठीक हुँदै गएपछि हामीले डिस्चार्ज गर्‍यौँ ।
त्यसपछि अनुसन्धान के भयो ? हामीलाई जानकारी छैन ।’ खानामा सिसा मिसाएर सामूहिक हत्याको प्रयास कसले र किन गरेको थियो ? प्रहरी प्रशासनले किन अनुसन्धान गरेन ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
३७ वर्षीय बाबुले आफ्नै छोरीलाई रातको २ः०० बजे अस्मिता लुटे पीडितकी आमाले दिईन उजुरी !
कोदालो प्रहार गरी आफ्नै आमा र हजुरआमाको ह**त्या गर्ने एक युवकलाई जन्मकैद !